RASMI: Kooxda Barcelona oo xaqiijisay mudada uu garoomada ka maqnaanayo Arthur Melo – Gool FM
(Barcelona) 08 Feb 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xaqiijisay mudada uu garoomada ka maqnaanayo ciyaaryahankeeda Arthur Melo.
Arthur ayaa wajahaya muddo bil ah oo uu garoomada ka maqnaan doono, iyadoo Barcelona ay shaacisay in mudadaas ay wayn doonto adeegga laacibkan.
Laacibka khadka dhexe ee Barcelona, Arthur ayaa muddo afar todobaad ah garoomada kaga maqnaan doona dhaawac muruqa ah sida ay shaacisay kooxda ka dheesha horyaalka La Liga.
22-sano jirkaan ayaa seegi doona ugu yaraan afarta kulan ee soo aaddan oo ay kooxdiisu ciyaari doonta, kulamada horyaalka ee ku soo wajahan Barca waxa ay kala yihiin; Athletic Bilbao, Real Valladolid iyo Sevilla, sidoo kale lugta hore ee wareegga 16-ka Champions League ayey ku wajahayaan naadiga Lyon.
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa bayaan ay ka soo saartay xaaladda Arthur oo lagu daabacay website-ka rasmiga ah ee naadiga waxa uu u dhignaa: “Tijaabooyin la qaaday ayaa caddeeyay in xiddiga safka hore ee kooxda Arthur Melo uu qabo dhaawac muruqa bidix ah, waxaana la filayaa inuu maqnaan doono ku dhowaad 3 illaa 4 isbuuc.
“Haddii saadaalintu ay sax tahay, Arthur waxa uu seegi doonaa ugu yaraan afar kulan dhaawac dartiis.”